အမှတ် 14 ဆောင်းဦးရာသီ 2021 - အဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ် 14 ဆောင်းဦးရာသီ 2021
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ဆောင်းရာသီ၏အုံ့ဆိုင်းနေသောဆောင်းရာသီမတိုင်မီနောက်ဆုံးနေရောင်ခြည်၏နောက်ဆုံးနွေးထွေးသောရောင်ခြည်များကိုစုပ်ယူနေစဉ်၊ လိင်၊ အချစ်နှင့်အင်တာနက်နယ်ပယ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့်စိတ်ကြည်နူးဖွယ်သတင်းအချို့ဖြစ်သည်။
TRF တွင်ငါတို့သည်ဤလအနည်းငယ်အတွင်းအလုပ်များနေခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနစာတမ်းအသစ်အကြောင်းဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ရန်အစိုးရမူဝါဒအသစ်အချို့အတွက်အကြံပြုချက်များကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကူအညီလိုအပ်လျှင်သုံးစွဲသူများသိနိုင်ရန်ကူညီဖြေဆိုရန်ပဟေwithိတစ်ခုနှင့်အတူလူငယ်များအားညစ်ညမ်းစေသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းက porn သုံးစွဲမှုအပေါ်ဖင်လန်စစ်တမ်းအသစ်ကနေစိတ်အနှောင့်အယှက်ရလဒ်အချို့ရှိသည်။ နွေရာသီတွင် The Reward Foundation အဖွဲ့သည်ကျောင်းများကိုအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ညီလာခံရာသီအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပရိုဖိုင်းကိုချွန်ထက်ခြင်း ဒီထုတ်ဝေမှုမှာငါတို့အွန်လိုင်းကကလေးလုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် John Carr OBE ရဲ့အပိုဆုဧည့်သည်ဘလော့ဂ်လည်းရှိတယ်၊ ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုဖော်ထုတ်တာနဲ့ဆန့်ကျင်တာတို့ပါဝင်ပါတယ်။
စီအီးအို Mary Sharpe
စာနယ်ဇင်းကိုပိတ်လိုက်ပါ။ The Reward Foundation မှသုတေသနအသစ်
“ Reward Foundation” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ရွယ်တူအချင်းချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ထားသောစာတမ်းအသစ်ကိုကြည့်ပါ။ပြဿနာညစ်ညမ်းပုံအသုံးပြုနည်း: ဥပဒေနှင့်ကျန်းမာရေးမူဝါဒထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ"လက်ရှိစွဲလမ်းမှုအစီရင်ခံစာများဂျာနယ်" စိတ္တဇကိုဖတ်ကြည့်ပါ ဒီမှာမရ။ စာရွက်အပြည့်အစုံကိုဖတ်။ ဝေမျှရန်ဤ link ကိုသုံးပါ https://rdcu.be/cxquO.
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာ Darryl Mead တို့သည်အောက်တိုဘာလလယ်တွင်ကနေဒါနိုင်ငံ virtual တွေ့ဆုံပွဲ Connect to Protect ၌၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးကြလိမ့်မည်။ ပိုမိုသိရှိရန်အောက်ပါအကြောင်းအရာ ၆ ကိုကြည့်ပါ။
အခြေအနေများတွင်အစိုးရများနှင့်မိသားစုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်သောကလေးများအတွက်အန္တရာယ်များကိုသတိမပြုမိခဲ့ပါ စစ်တမ်း ဖင်လန်မှစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ ဖြေဆိုသူ ၁၀၀၀၀ ကျော်နှင့်စစ်တမ်းတစ်ခုကအသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်သောကလေးငယ်များသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုထိတွေ့ပုံကိုဖော်ပြသည်။ အဓိကတွေ့ရှိချက်မှာ ၇၀% ကသူတို့က ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကိုပထမဆုံးမြင်ဖူးသည်ဟုဆိုသည်။ ထိုအထဲမှ ၄၀% က ၁၃ နှစ်အောက်ကလေးများတရားမ ၀ င်ပုံများကိုပထမဆုံးထိတွေ့သောအခါဟုဆိုသည်။
အွန်လိုင်းကလေးသူငယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို ၀ န်ခံကြောင်း ၀ န်ခံသောသူတို့၏ ၅၀% ကျော်က၎င်းတို့သည်တရားမ ၀ င်ပစ္စည်းများနှင့်ပထမဆုံးထိတွေ့သောအခါဤပုံများကိုထုတ်မကြည့်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဘာပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုရှာကြသလဲဟုမေးသောအခါ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းက ၄ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်အကြားမိန်းကလေးများဟုပြောပြီး ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကယောက်ျားလေးများကိုကြည့်သည်ဟုဆိုသည်။ အခြားသူများက၎င်းတို့သည်ကလေးငယ်များ၏“ ဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောအကြမ်းဖက်မှု” ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည်ဟုဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသက်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာကျောင်းသင်ခန်းစာများသည်အလွန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤပြဿနာများသည်ပြသနာကြီးထွားလာသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်တရား ၀ င်ကုန်ကျစရိတ်များအားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိအစိုးရများသတိထားရန်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ဖြေရှင်းချက်တွေရှိတယ်။ ငါတို့အစိုးရတွေကိုအဲဒါတွေကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းကြပါစို့။ ဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ရန်သူတို့ကိုသင်၏လွှတ်တော်အမတ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးထိတွေ့မှု၏အသက်အရွယ်သည်ငယ်လေလေ porn စွဲလမ်းမှုပိုမိုဆိုးရွားလေလေဖြစ်သည်
“ တက်ရောက်သူ ၂၁.၆% ကနိုးကြားတက်ကြွမှုအဆင့်ကိုရောက်ဖို့တိုးလာတဲ့ပမာဏဒါမှမဟုတ်ပိုပိုပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကြည့်ဖို့လိုတယ်လို့ထောက်ပြတယ်။ ”
အဆင့်မြင့် porn စွဲရမှတ်များသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်
သက်သေသာဓကအားဖြင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရုံသာမကဘဲ porn ကိုအဓိကဖြစ်စေသည်
ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူတစ် ဦး သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အတင်းအကျပ် ၀ င်ရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုပင်သုံးစရာမလိုပါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကလုံလောက်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခသည်အလွန်ကြီးမားပြီးမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံဖက်ပြဿနာများသို့ ဦး တည်စေတတ်သည်။ သင်သည်သူတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်စိတ်ပူနေသောမည်သူကိုမဆိုသိလျှင်ဤသည်မှာ စာမေးပွဲတစ်ခု သူတို့သည်ပိုမိုရှာဖွေရန်ယူနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာအစီအစဉ်များသည်ဆက်ဆံရေး၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်မိဘဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသင်ကြားမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဟုစကော့တလန်အစိုးရ၏ယူနစ်မှလက်ခံထားသည်။ အပိုအရင်းအမြစ် ကျောင်းတွေမှာ ကြည့်ပါ ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ခန်းစာအစီအစဉ် ၇ ခုအတွက် ၎င်းတို့ကိုစကော့တလန်၊ အင်္ဂလန်နှင့်ဝေလတို့တွင်ရနိုင်သည်။ ငါတို့မှာအမေရိကန်ဗားရှင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစုံရှိတယ်။ သို့သော်ဥပဒေသည်တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံမတူညီသောကြောင့် sexting နှင့်ဥပဒေအကြောင်းသင်ခန်းစာမပါ ၀ င်ပါ။
မေလနှင့်ဇွန်လတို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe သည် ၄ ​​ပတ်ကြာလွတ်လပ်သောကျောင်းနှစ်ခုတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် sexting အကြောင်းသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ အောက်တိုဘာလမှာငါတို့ကလန်ဒန်နားကကောင်လေးတွေရဲ့ကျောင်းမှာမိဘများရဲ့သင်းအုပ်နေ့မှာပြောနေတာ။ အရင်တုန်းကငါတို့အဲဒီမှာဆွေးနွေးပွဲတွေအများကြီးပြောပြီးပြီ။
လူမှုမီဒီယာလင့်ခ်အသစ်များ: “ ငါ့အဖော်ကညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူတစ်ယောက်ပါ။ ”
ငါတို့က Twitter အပြင်ဒီနယ်ပယ်မှာတိုးတက်မှုတွေအကြောင်းမင်းကိုအသိပေးဖို့နဲ့မင်းကိုကူညီဖို့ဆိုရှယ်မီဒီယာအရင်းအမြစ်တွေပိုထည့်ပြီးပြီလို့ကြေညာတာကိုဝမ်းသာပါတယ်။ Instagram, YouTube, Reddit နှင့် TikTok ဤနောက်ဆုံးသည်ဆယ်ကျော်သက်များအကြားရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်အသက်အရွယ်မရွေးလူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်ဆံရေးပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုသတိပြုမိရန်လိုသည်။ ဥပမာအနေနဲ့၊ ငါတို့ခင်ပွန်းဟာညစ်ညမ်းတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုကနေတိုတောင်းတဲ့ဗွီဒီယို ၃ ခုရှိတယ်။ အသက် ၁၀ နှစ်အောက်သူနဲ့သူ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ညစ်ညမ်းပုံတွေထိတွေ့မှုရဲ့သက်ရောက်မှုအကြောင်းလူငယ်တစ် ဦး နဲ့အခြားတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းထားသော Finnish ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုအတိုလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကြည့်ပါ ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်ရှိဤဗီဒီယိုများအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်
ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ပါ မင်းကငါတို့ရဲ့ပုံမှန်ထွက်ရှိမှုကိုအမီလိုက်ဖို့နဲ့အွန်လိုင်းမှာရှိနေတာကိုမြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ခွဲတွေထဲကဘယ်ဆိုင်မဆို၊
YouTube ကို: https://www.youtube.com/channel/UC1-mihcAj9mf-nJKLWiT5KA?
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏အကြောင်းအရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူများအားညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်တောက်ပေးနိုင်သော app အသစ်တစ်ခုကိုသင့်အားအသိပေးလိုသည်။ မှာရနိုင်ပါတယ် Remojo.com သူ၏အကြီးအကဲ Jack Jenkins သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဇွန်လတွင်ငါတို့အားတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဤအက်ပ်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကြေးလာဘ်မယူပါ။ ငါတို့ကအဲဒါကထုတ်ကုန်ကောင်းတစ်ခုလို့ယုံကြည်တာကြောင့်အဲဒါကိုပဲပြောတာပါ။
ယဉ်ကျေးမှု Reframed virtual ညီလာခံ 2-3 အောက်တိုဘာလ 2021 The Reward Foundation သည်ဤပွဲ၏ပံ့ပိုးကူညီသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစပီကာများရှိသည်။ မှတ်ပုံတင်ပါ ဒီမှာ.
အားကောင်းသည့်အတူတကွကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Virtual ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတစ်ခုလူထုကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်မှုဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားဖြင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံပုံများမှကလေးများကာကွယ်ခြင်းမရ။ ဒီအပေါ်ပိုပြီးကြည့်ပါ Global Virtual Summit ကိုကာကွယ်ရန်ချိတ်ဆက်ပါ ၂၀၂၁ အောက်တိုဘာ ၁၃-၁၅ ။ TRF သည်ဤထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်စာတမ်းနှစ်စောင်တင်ပြလိမ့်မည် ဒီမှာ မှတ်ပုံတင်ရန်): ပထမတစ်ခုသည်နိုင်ငံ ၁၆ နိုင်ငံတွင်အသက်အတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအတည်ပြုရေးအတွက်နိုင်ငံတကာတိုးတက်မှုအကြောင်း Dr Darryl Mead မှပြောကြားခဲ့သည်။ အထက်ပါအကြောင်းအရာ ၁ တွင်ဖော်ပြထားသော၎င်းတို့၏သုတေသနစာတမ်းအသစ်၌ဒုတိယမြောက်သည် Mary Sharpe မှဖြစ်သည်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲနှစ်ခုစလုံးကိုလာမယ့်အပတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel မှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသူတို့ကိုတိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်တယ်။
Apple ၏ Breakthrough Initiative re ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပစ္စည်းများအတွက်ခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှု
ပြန်လည်ထုတ်ဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့ ၀ မ်းမြောက်ပါသည် ဒီမှာ အွန်လိုင်းကလေးသူငယ်လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်သူ John Carr OBE ၏အလွန်ကောင်းသောဘလော့ဂ်အသစ်သည်ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပစ္စည်းများ (CSAM) ကိုနေရာချထားရန်လွယ်ကူစေရန်ရှာဖွေသည်။ ဒီမှာတစ်ခုရှိတယ် အစောပိုင်း သူသည်တူညီသောဘာသာရပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။
အားလုံးပဲနောက်တစ်ကြိမ်အထိအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။ မင်းမှာမျှဝေရကျိုးနပ်တဲ့ဆုလာဘ်သတင်းတစ်ခုခုရှိရင်ငါတို့ကိုအသိပေးပါ။ အချစ်၊ လိင်နဲ့အင်တာနက်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမင်းကအရေးကြီးတယ်လို့မင်းထင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းငါတို့ရေးရတာဝမ်းသာပါတယ်။